Modulator Vagadziri & Vatengesi | China Modulator Fekitori
Chigadzirwa Pfupiso ZJ3308AT 8 muna 1 ATSC modulator ichangogadzirwa chigadzirwa inotsigira IP yekuisa. Iyo ine 8 multiplexing chiteshi uye 8 ATSC modulating chiteshi, uye inotsigira yakakwira 256 IP yekuisa kuburikidza neG GE port. ZJ3308AT ine simba rinoburitsa rinokwana nevatakuri vasiri-pedyo (50MHz ~ 960MHz) inoburitsa kuburikidza neRF inoburitsa interface. Iyo system yeichi chishandiso inogona kunge iri pamutsara inodzorwa uye kukwidziridzwa kuburikidza ne network, iyo inogona kushandiswa zvakanyanya muATCC yedhijitari yekuparadzira network setup uye iyo ...
ZJ3542D Multi-chiyamuro Modulator (DVB-T Kunze)
Mutsara ZJ3542D yakawanda-yekuisa modulator ndeye-mune-chimwe chishandiso chinobatanidza kudzikisira, trans-mux uye modulation mune imwe kesi kushandura masaini muRF kuburitsa. Iyo 1-U kesi inotsigira ina tuner zvinopinda kuti ugamuchire chiratidzo kubva kune satellite, tambo kana yepasi. Kuti usangane nezvinodiwa zvakasiyana nevatengi, ZJ3542D zvakare yakagadzirirwa 2 ASI yekuisa, uye zvinobuda nemapoka maviri akapatsanura ASI zviteshi uye 2 MPTS UDP IP chiteshi. Izvo zvinoburitswa zvakagadziriswa zviratidzo zvinofanirwa kutambirwa neTV, STB uye nezvimwe Iyo USB por ...
Outline ZJ3402E ndeye yakakwira-yekuita modulator yakagadzirwa maererano neDVB-S2 (EN302307) standard inova ndiyo muyero wechizvarwa chechipiri cheEuropean broadband satellite telecommunication. Iko kushandura iyo yekuisa ASI uye IP zviratidzo neimwe nzira kuva digital DVB-S / S2 RF kuburitsa. BISS kukwikwidza modhi inoiswa kune ino DVB-S2 modulator, iyo inobatsira kugovera zvakachengeteka zvirongwa zvako. Zviri nyore kusvika kwese uye kure kure kutonga neWebhu-server NMS software uye LCD kumberi kwepaneru ....
8 mu1 DVB-T Modulator
Rondedzero Iyi 8 mu1 DVB-T modulator chishandiso-che-chimwe-chakagadzirwa nesu. Iyo ine 8 multiplexing chiteshi uye 8 DVB-T modulating chiteshi, uye inotsigira yakakwira 256 IP yekupinda kuburikidza ne GE chiteshi uye 8 isiri-padhuze vatakuri (50MHz ~ 960MHz) kuburitsa kuburikidza neRF kuburitsa interface. Iyo chishandiso inozivikanwa zvakare neepamusoro yakasanganiswa nhanho, kuita kwepamusoro uye mutengo wakaderera. Izvi zvinogadzirika kune ichangoburwa chizvarwa DTV nhepfenyuro system. Makiyi Akakosha ● 3 GE madoko (max 256 IP mukati): Data1 & Dat ...
ZJ3306I 6 muna 1 ISDB-T Modulator
Chigadzirwa Pfupiso ZJ3306I 6 muna 1 ISDB-T modulator ndiyo yazvino inogadzira Mux-modulating mudziyo. Iyo ine 6 multiplexing chiteshi uye 6 (ISDB-Tb) modulating chiteshi, uye inotsigira yakakwira 192 IP yekuisa kuburikidza ne3 GE chiteshi uye 6 asiri-ari padyo vatakuri (50MHz ~ 960MHz) kuburitsa kuburikidza neRF kuburitsa interface. Iyo chishandiso inozivikanwa zvakare neepamusoro yakasanganiswa nhanho, kuita kwepamusoro uye mutengo wakaderera. Izvi zvinogadzirika kune ichangoburwa chizvarwa DTV nhepfenyuro system. Makiyi Akakosha ● 3 GE zviteshi (ma ...
Rondedzero ZJ2406B DVB- (T) modulator ndiyo yedu yese-in-one chishandiso inosanganisa demodulation, trans-mux uye modulation mune imwe kesi kushandura masaini kuita DVB- (T) RF kuburitsa uye IP kuburitsa pamusoro peUDP. Chigadzirwa chakashongedzerwa ne2 DVB-S / S2 tuner zvinopinda, imwe GPS 10MHz yekuisa chiteshi uye imwe 1PPS yekuisa chiteshi. Izvo zvinoburitswa zvakagadziriswa zviratidzo zvinofanirwa kutambirwa neTV, STB uye nezvimwe. Iyi DVB- (T) modulator zvakare panguva imwe chete inotsigira inowirirana mitsara uye isingaite dhijitari pre-kukanganisa. Basa reBISS rakaiswawo mukati ...
ZJ2406 DVB-T2 Modulator Pamberi nePashure Panel Mufananidzo
Outline ZJ2406 DVB-T / T2 modulator ndicho chigadzirwa chedu chitsva chakagadziridzwa kutevedzera iyo DVB-T / T2 standard. Nayo yeepamberi modulating tekinoroji, ino modulator inogona kunyatso kushandisa iyo yepasi masisitimu zviwanikwa uye kuita kuti zvikwanise kupa akavimbika masaini eakagadziriswa, nhare uye anotakurika michina. Inofananidzwa neDVB-T, chiteshi chinokwaniswa ne30% pasi peiyo yakafanana inotakura kune ruzha chiyero (CNR) chikumbaridzo. Zvakare, ichi chishandiso chinogona kukwidziridzwa uye kudzorwa kuburikidza ne network syst ...
Pfupiso ZJ2406 DVB- (T) modulator ndicho chigadzirwa chedu chitsva chakagadziriswa kutevedzera iyo DVB- (T) yakajairwa. Nayo yeepamberi modulating tekinoroji, ino modulator inogona kunyatso kushandisa iyo yepasi masisitimu zviwanikwa uye kuita kuti zvikwanise kupa akavimbika masaini eakagadziriswa, nhare uye anotakurika michina. Inofananidzwa neDVB-T, chiteshi chinokwaniswa ne30% pasi peiyo yakafanana inotakura kune ruzha chiyero (CNR) chikumbaridzo. Zvakare, ichi chishandiso chinogona kukwidziridzwa uye kudzorwa kuburikidza ne network system ...